Sawirada Isbaanishka Chema Madoz oo kaa yeeli doona laba jeer | Abuurista khadka tooska ah
Sawirada Isbaanishka Chema Madoz oo kaa dhigi doona laba jeer muuqaal
Ciise Arjona Montalvo | | Sawir, Dhiirrigelinta
Jose Maria Rodriguez Madoz ama si fiican loogu yaqaan Chema Madoz ku dhashay 1958, Madrid, waa sawir qaade caan ah oo Isbaanish ah kaas oo 2000 ku guuleystay 'Abaalmarinta Sawirka Qaranka'. Wuxuu ku soo qaatay bandhigyo badan, labadaba Spain iyo dibaddaba, iyo kuwiisa shuqullo sawir gacmeed madow iyo caddaan ah. Shaqadiisu waxay aruurisaa sawirro laga soo qaaday ciyaaro khiyaaliga xirfadeed leh.
Madoz caan ku yahay markuu ka hadlayo ujeedada sawiradiisa:
Xaqiiqdu waxay tahay, Ma garanayo sida ay u dhaqmi doonaan ama waxa ka xanaajin doona daawadayaasha, ayuu yiri Madoz. Waxaan raadiyaa sawirro dhaqaaqa oo i buuxiya, oo iga dhigaya inaan dareemo inaan sameynayo wax ka duwan. Waxaan rabaa inaan awood u yeesho inaan hor istaago sawiradayda oo aan dareemo inaan laxiriiri karo. Haddii sawir uu wax igu yiraahdo, waxaan hubaa inay jiri karaan dad kale oo la kulmi doona wax la mid ah, ama wax la mid ah.
Chema Madoz kaliya ka shaqeeya sawiradaada gudaha Madow iyo caddaan ka dhigan tahay diidid ying iyo yang ee canaasiirta uu sawiro. Walxaha qaadaya riwaayad isdaba joog ah iyo mid yar oo xulashadeeda kaliya ee adduunka la tuso ay ku jirto Madow iyo Caddaan.
Waxaan u isticmaalaa madow iyo caddaan sababo kala duwan awgood. Midka koowaad waa jimicsi dhimis, maadaama aad midabka ku xaddideyso laba ikhtiyaar oo iska soo horjeedda, wax waliba ku dhaca walxaha (guud ahaan waa laba shay oo iska soo horjeedda). Dhinaca kale, waxay fududeyneysaa in lagu ciyaaro qaab dhismeedka marka la sameynayo xiriiriyeyaal ama xiriiryo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawirada Isbaanishka Chema Madoz oo kaa dhigi doona laba jeer muuqaal
Midabbada biyaha cad ee Viktoria Kravchenko
Nidaamka hal abuurka ee qaabeynta astaanta: tusaalooyin wax ku ool ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato